Soo celi dejimaha desktop-kaaga KDE 4 | Laga soo bilaabo Linux
Ku soo celi dejimaha desktop-kaaga KDE 4
Channels | | Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Saaxiibbo aad u wanaagsan, waxaan kula wadaagi doonaa wax aan bartay si aan ula qabsado KDE ugu fududeeyo adeegsadayaasha cusub ee aan gacanta ku hayn qalabka desktop-ka ee KDE 4 Plasma.
Waxay soo baxday in markasta oo aan u rakibo KDE qof aan waligiis isticmaalin, waxay ku dhammaanayaan tirtirka qaybaha garaafka ee baararka, ama ka sii xun, dhammaan guddiga.
Tani waa dhacdo caadi ah maadaama ay fududahay in la furo waxyaabo garaaf ah oo wax qalad ah lagu tirtiro.
Ahaanshaha isticmaale KDE cusub (oo laga yaabo inay ka timaaddo Windows), ma sahlanaan doonto in qeybta garaafka ama guddiga dib loogu celiyo meeshiisa, desktop-ka wuxuu noqon karaa mid aan la isticmaali karin sidoo kale maxaa yeelay waxaad tirtirtay liiska dalabyada, saxanka nidaamka ama maareeyaha hawsha lafteeda.
Markaa isticmaalehaasi wuu ku soo wacayaa oo wuxuu kuu sheegayaa: "Haye, guddigeygii waa dhammaaday, maxaan sameeyaa si aan dib ugu soo celiyo?"
Hagaag, taasi waa waxa aan isku dayi doono inaan kuugu sharaxo casharkaan yar. U dhig macnaha guud, aan u nimaadno barta:
Hab fudud oo lagu soo kaban karo guddi shaqeynaya ayaa leh ikhtiyaarka ah "ku dar guddi cusub oo cusub", laakiin ka warran haddii aan kaaga tagnay desktop aad u sharraxsan oo aad rabto inaad si fudud ku soo celiso?
Aan aragno: KDE guryaha 5 faylasha qaabeynta ee muuqaalka iyo walxaha kombiyuutarka ee ah waxa aan u baahanahay.
Waxay ku jiraan /home/user/.kde/share/config/ (Uguyaraan waxay kujiraan Debian Wheezy, qeybaha kale ee qeybinta hadii aysan meesha oolin waa inay ahaataa mid lamid ah).
Hagaag, galkaas waxaan ku raadineynaa ujeedooyinkeena, 5-taan feylal:
Waxaan horeyba u haynay meel ay ku yaalliin. Faylashaasi waxay leeyihiin qaabeyn aad ku siisay desktop-ka muuqaal ahaan iyo shaqeyn ahaanba.
Hadda waxaan u guurineynaa galka ay ku nabad qabaan, tusaale ahaan waxaan abuureynaa gal la yiraahdo dib u celin adeegsadeheena oo nuqul ka samee 5ta fayl.
Hagaag, hadda waxaan u jeesanay sixirka qoraallada bash. Waxaan abuureynaa feylal qoraal cusub oo la yiraahdo tusaale ahaan: soo celi desktop.sh waanan siinay rukhsad. Waxaan ku fureynaa tifaftiraha qoraalka oo waxaan ku qoreynaa waxyaabaha soo socda gudaha:
cp /home/usuario/.restaurar/activitymanagerrc /home/usuario/.kde/share/config/
cp /home/usuario/.restaurar/plasma-desktoprc /home/usuario/.kde/share/config/
cp /home/usuario/.restaurar/plasmarc /home/usuario/.kde/share/config/
cp /home/usuario/.restaurar/plasma-desktop-appletsrc /home/usuario/.kde/share/config/
cp /home/usuario/.restaurar/plasma-windowed-appletsrc /home/usuario/.kde/share/config/
qdbus org.kde.ksmserver /KSMServer logout 0 0 0
Xusuusin: Waddooyinka waa inay u dhigmaan kuwa nidaamkaaga, labadaba faylasha dib loo soo celiyo iyo faylasha qaabeynta KDE.
Diyaar. Laba-guji guji faylkaas ayaa soo celin doona feylasha qaabeynta desktop-ka oo ka baxa isbedelada si ay u dhaqan galaan.
Xusuusnow inaad keydiso wixii aad furtay ka hor intaadan socodsiinin si aadan u waayin wax aadan kaydsan markii aad xiratay fadhiga.
Hada markuu isticmaalehaasi kuu yeero yaa tirtiray qeyb ama shax garaaf ah isagoo leh waxa uu sameyn karo si uu u dhigo siduu ahaa, kaliya waa inaad dhahdaa: fur faylka ka soo kabashada desktop.sh ee aan ku keydiyey desktop-ka waana intaas!
Waxaan rajeynayaa inay waxtar yeelan karto.
Si aad ula wadaagto, farxad!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Ku soo celi dejimaha desktop-kaaga KDE 4
Aad ayey u fiicneyd wax badan ayey i caawin laheyd markii aan rakibay kde oo aniga igu dhacay si sax ah = xD waxay igu kalliftay dib u soo celinta alwaaxyada iyo waxyaabo kale laakiin waan sameeyay laakiin qoraalladaadu waxay u eg yihiin gacmo gashi calaamadaha lagu garto haddii uu saaxiib dhaco: p
Maqaal aad u wanaagsan oo lagama maarmaan u ah dadka cusub iyo kuwa cusub ee aniga oo kale ah. 🙂
Waxaan la wadaagi doonaa dhibcahaaga kala duwan.
jahooyinka kale ee galka ah waa ~ / .kde4 /…
Talo wanaagsan. Sidoo kale, khaladaadka noocan ah igama dhicin KDE 4.
Wax aad u fiican oo ku saabsan qoraallada Waxaan mar uun tijaabiyay KDE oo ilama qabsanin deegaanka, waxaan si fudud u tirtiray galka .kde wax walbana waxay ku noqdeen sidii ay ugu yimaadeen asal ahaan. Xaqiiqdii wax yar oo kafiican laakiin waqtigaas ayaa ii adeegay hehe. Thanks for tip.
Ku jawaab Mikail
Mararka qaar tani waa fikrad fiican, haddii aad leedahay ~ / .kde4 / oo dhowr jeer cusbooneysiiyay KDE4.
Weligay waa inaan ku sameeyaa OpenSUSE, waxaan lahaa qaab isku mid ah noocyadii ugu horreeyay ee KDE4, xoogaa isbeddello waaweyn ayaa la sameeyay oo waxaa fiican in dib loo bilaabo.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Weligay dib uma habeynin plasma, laakiin ma ahan wax aad u badan in la ogaado.
Ku jawaab patodx
Dadka KDE waa in la weydiiyaa inay keydiyaan naqshadaha desktop (nidaamka caadiga ah ama isticmaale-abuuray).
Wax la mid ah ayaa lagu sameyn karaa waxqabadyada, laakiin dad yar ayaa fahansan iyaga.
Waad ku mahadsan tahay wadaagista, aniga ayey ii noqon doontaa waxtar.
Jawaab Manuel R
Waan ku faraxsanahay inay waxtar kuu leedahay.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu tijaabiyo desktop-ka ka dibna si dhakhso leh loogu celiyo sidii ay ahayd.
… Ama in aad yeelato dhowr qaabeyn, tusaale mid leh dock, mid kale oo leh howl qabad, iwm oo si fududna ugu kala goosha hadba munaasabada.
Fiiro gaar ah: haddii aad u isticmaasho faylalkaan si aad u keydiso qaabeyntaada oo aad ugu soo celiso kombiyuutar kale ama rakibidda Linux kale, taxaddar maxaa yeelay faylka plasmarc waxaa ku jira macluumaadka si aad u dhigto mawduuc gaar ah oo plasma ah. Waa inaad haysataa isla mawduucan plasma ah oo lagaa rakibo ama laga boodbo faylka plasmarc si aad u awoodo inaad adeegsato mawduuc kale markaad dib u soo celinta qaabeyntaada.
Waxyaabaha kale ee aan ogaaday ayaa ah in dhowr jeer ay dhacdo in tirtirida walxaha garaafka qaarkood aysan sifiican usoo celinaynin, haddii ay taasi dhacdo waa inaad tirtirtaa dhammaan guddiga kahor intaadan soo celin.
Charles philip dijo
Miyaanay sahlaneyn inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhajiso /home/usuario/.kde/share/config/ haddii aan ku saxarono desktop-keena ama uusan shaqeyn doonin?
Ku jawaab Carlos Felipe
Ma ogtahay haddii ay sidoo kale la shaqeyso KDE 5 Plasma?
[Tilmaan] Ku habayn GRUB2 gudaha ArchLinux
[Linuxea your Windows] Laga soo bilaabo Windows - Qaybta II: Bash ku Windows (Iyo xoogaa Wallpapers anigaa leh)